Yangu Vodafone inogadziridzwa new design | IPhone nhau
Iye zvino angangoita ese makambani enhare ane mafomu avo avo ekuti vagadzirise akawanda ezvikamu zvemitsara yedu yechibvumirano. Iye uyo aida kutora akarebesa mune iri basa aive Yoigo, uye isu taifanira kuenda kune wechitatu-bato kunyorera, asi ikozvino yave neayo ega maitiro. Mune ino kesi isu ticha taura nezvayo My Vodafone, iyo Vodafone nhare yekushandisa yakagadziridzwa zvishoma, kusanganisira dhizaini nyowani. Idzi nhau dzinonyanya kutarisana nemenyu inodonhedza kuruboshwe, uye izvo ndezvekuti iyo My Vodafone app yakavandudza zvakanyanya nekufamba kwekuvandudzwa.
Ini ndinorangarira gore rekutanga re My Vodafone application, raive risingakwanise. Nguva pfupi yapfuura, dhizaini nyowani yakakunda, asi izvo zvaisaperekedzwa nekuita zvaive, takazviwana tiine application yainonoka uye yaida yakawanda yekurodha pasi data (kunyangwe patinoshandisa iyo My Vodafone app iyo data haitiripi). Mune ino yazvino yekuvandudza, mushure mekuverengeka kwenyowani yakanangana nekuita, isu tinowana inokurumidza uye yakajeka mamiriro ekudonha-pasi menyu.
Chii Chitsva muVhezheni 4.0.0
Isu tinopa menyu nyowani zvakanyanya kutaridzika uye intuitive!
Kuenda kune yega yega maficha eMy Vodafone inogona kunge iri basa rakaoma munguva yakapfuura.
Neshanduro iyi nyowani, isu tinovandudza kupinda kune manejimendi yezvigadzirwa zvako.
Ramba uchitumira makomendi anotibvumidza isu kuvandudza uye kuswedera padhuze pane izvo zvaunoda.
Iye zvino iko kushanda kunoshanda kugadzikana zvishoma uye chokwadi ndechekuti iyo yakagadziridzwa menyu yanga ichidikanwa, nekuti kuunganidzwa kwesarudzo kwakaita kuti zvinyanye kushata. Inotora 6,2 MB chete uye inowirirana nechero chishandiso cheIOS pamusoro peIOS 7.1, inenge ichida kushanda pane chero chinhu chinowanikwa cheIOS. Tora mukana wekuti uwane zvakazara mairi, uye yeuka kuti Vodafone iri kupa mairi maGB ane chiyero muzhizha rino, tarisa muchikamu che "Kukwidziridzwa".
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Yangu Vodafone inogadziridzwa new design
Ipa kure gadzirisa kana.
"Shingairira kukwidziridzwa kwako Nyamavhuvhu 31 isati yasvika uye wedzera GB yako pairi inivhoyisi imwe kusvika Nyamavhuvhu 21 ne € 3. chete
Ini handidi chero yeaya simberge mugger
Microsoft Pix, inotibvumidza kutora mifananidzo neiyo iPhone mune ingangoita nyanzvi nzira